Weeraryahankii hore ee Kooxda Chelsea iyo Xulka qaranka Senegal ee Demba Ba oo ka fariistay kubadda cagta - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
September 14, 2021 at 11:15 Weeraryahankii hore ee Kooxda Chelsea iyo Xulka qaranka Senegal ee Demba Ba oo ka fariistay kubadda cagta2021-09-14T11:15:20+02:00 CAYAARAHA
(Yurub) 14 Sebt 2021. Weeraryahankii hore ee Kooxaha Chelsea, Newcastle United iyo West Ham United ee Demba Ba ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay kubadda cagta, isagoo jira da’da 36-sano.
Xiddigii hore ee xulka qaranka Senegal ayaa Chelsea kula guuleystay Europa League sanadkii 2013-kii, sidoo kale waxa uu labo jeer qaaday horyaalka Turkiga, markii ugu horreysay waxa uu kula guuleystay Kooxda Besiktas xilli ciyaareedkii 2016-17, kaddibna waxa uu la qaaday Istanbul Basaksehir kal ciyaareedkii 2019-20.
Ba waxa uu ahaa koox la’aan kaddib markii uu ka soo dhaqaaqay Kooxda Swiss Lugano bishii Agoosto.
“Muxuu ahaa safar cajiib ah,” Ba ayaa sidaas ku soo qoray bartiisa Tiwtter-ka, isagoo intaa raaciyey: “Kubadda cagta ayaa i siisay shucuur aad u qurux badan”.
Markii ugu horreysay Ba waxa uu dalka England u soo dhaqaaqay bishii Janaayo ee sanadkii 2011-kii, waxaana uu ku soo biiray West Ham United, isagoo kaga yimid Hoffenheim, kaddib markii uu u dhaliyey 40 gool 103 kulan oo uu u saftay Kooxda Jarmalka ah.
Waxa uu u dhaliyey todobo gool 13 kulan oo uu u saftay Kooxda Hammers lagu naynaaso, ka hor inta uusan uga dhaqaaqin dhanka Newcastle lix bilood kaddib.
Newcastle waxa uu u dhaliyey 29 gool 57 kulan oo uu u saftay, waxaana uu bishii Janaayo ee 2013-kii uu ku biiray Chelsea, waxaana uu safka hore ku billowday 23 ka mid ah 51 kulan oo uu u saftay Blues, isagoo u dhaliyey 14 gool, isagoo weliba ahaa dooqa saddexaad ee weerarka kooxdaas kana dambeeyey Samuel Eto’o iyo Fernando Torres.
Wuxuu sidoo kale Ba ka soo ciyaaray Turkiga iyo Shiinaha oo uu kaga dheelay kooxda Shanghai Shenhua, guud ahaan ayuuna ku dhawaaqay inuu haatan isaga fariistay kubadda cagta.
« Livestock production in Somaliland is stabilized through farmer trainings
Tababare Arsene Wenger oo ka hadlay Shaxda Kooxda Arsenal iyo qaab ciyaareedka niyad-jabka leh oo ay ku billowdeen xilli ciyaareedkan »